Maxamed Cismaan Caruus oo ka sheekeeyay wixii ka dhacay Garoonka Muqdisho. | HomeWARARKAWARAYSIYOCIYAARAHAARIMAHA DIINTAARIMAHA BULSHASAMAQAALO
Maxamed Cismaan Caruus oo ka sheekeeyay wixii ka dhacay Garoonka Muqdisho.
Sunday June 30, 2013 - 09:46:05 in by admin Maxamed Cismaan Caruus oo ka mid ahaa ragii kasoo baxsaday Al-shabaab islamarkaana la socday Sheekh Xasan Daahir ayaa kahadlay wixii ay kala kulmeen garoonka diyaaradaha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho.
Waxa uu sheegay Caruus in isaga uu si xeeladeesan uga baxsaday halkii ay wax ka dhaceen, laakiinse waxa uu tilmaamay in dhibaato xoog badan loo geestay.
Dowladda Soomaaliya ayaa xabsi ku xaabisay dhamaan ragii la socday Xasan Daahir iyo Intii keenay intaba, inkastoo qaarkood oo Caruus uu ka mid yahay ay bad baadeen.